Posted by ZT at 11:06 PM
သတိပိုသည်မရှိပေါ့.. ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ကိုးကားတာလဲ မမှားဘူးပေါ့။ cloneပေါ်လာရင်..အငြင်းမပွားရတော့ဘူး :D
ကိုယျရေးတာလညျး လကျရှိရေးနတေဲ့ paper မဟုတျတဲ့အတှကျ ပွနျကိုးကားရပါတယျ မထညျ့လို့မရပါ Reference လုပျထားခွငျးသညျ Plagiarism မဖွဈအောငျ ထညျ့ခွငျးမဟုတျပါ အဆိုပါအကွောငျးအရာကို စိတျဝငျစားပါက ဖတျလို့ရအောငျ ရညျညှနျးရခွငျး ဖွဈပါသညျ။ Published လုပျပွီးသား Articles မြားကို တဈခကျြကွညျ့ပါ အမြားအားဖွငျ့ Self Reference မြားပါရှိပါသညျ။
His problem is he cited his preliminary report for same project during the submission of his final report. :D
တို့တော့ ဒီလိုပဲ ကူးချလိုက်တာပဲ
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဖိုင်နယ်သီးစစ်ကိုရေးတာမှာ သူ့ဆရာလုပ်ခဲ့တဲသီးစစ်ကို အစအဆုံးပြန်ကူးထည့်ပြီးတင်ပြလိုက်သတဲ့. ပုံပြင်ပါဆိုမှာတော့ပုံပြင်လို့မှတ်ပါ.
အဲဒါဆရာက ဂရိတ်ဖိုက်ပေးလိုက်သတဲ့. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆရာကပြောတယ်တဲ့ အဲဒီဟာ ကိုဆရာတင်ခဲ့တုံးက ဂရိတ်ဖိုက်ရသင့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာကို သူ့ဆရာက ဂရိတ်သရီးဘဲပေးခဲ့တယ်တဲ့ အဲဒါကြာင့် ဂရိတ်ဖိုက်ရသင့်တဲ့သူ့ သီးစစ်ကို အခုလိုတင်ပြလာတဲ့အခါ ဂရီတ်ဖိုက်ပေးသင့်တယ်လို့ယူဆပြီးပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီကျောင်းသား မှန်ပါတယ်။ self plagiarism ကို ဆရာတော်တော်များများက လျစ်လျူရှုပေးပေမဲ့ တကယ်တန်းကျတော့ အဲဒါလဲ တရားမ၀င်ပါဘူး။ နောက်တမျိုးရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ စာတမ်း ၁ စောင်ပဲ ရေးရမဲ့ကိစ္စကို ၃ စောင်လောက်ခွဲရေးပြီး လူတတ်ကြီးလုပ်တာပါ။ အဲဒါလဲ မရပါဘူး။